Somalia oo heshay fursad kale oo qaali ah oo soo kabashadeeda wax ka tareeysa | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia oo heshay fursad kale oo qaali ah oo soo kabashadeeda wax...
(Hadalsame) 01 Abriil 2020 – Wadamada bixiya deymaha ee ku midaysan ururka Paris Club ayaa isku raacay inay Soomaaliya ka cafiyaan deyn dhan 1.4 bilyan oo doolar.
Go’aankan ayaa Soomaaliya u suuragalinaya in ay raadsato ilo dhaqaale oo cusub taasi oo gacan ka gaysan doonta dib uga soo kabashada Soomaaliya 30 sano oo dagaal sokeeeye ah.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya, Dr Abdirahman Beyle ,ayaa soo dhaweeyay go’aanka Soomaaliya looga cafinayo sadax meelood meel deyntii dibadaha looga lahaa.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in arrintan ay tahay tallaabo uu dalkiisa horey u qaaday islamarkana uu so dhaweynayo.
“Waxaan wadaxaajood mira dhal ah la yeelanay wadamada ku bahoobay Paris Club waana soo dhaweynaynaa taageeradooda ay nooga cafiyeen deyntii ay nagu lahaayeen ,” waxaa u wasiir Beyle sidaasi u sheegay wakaalad wararka ee Reuters.
Wsaiirka ayaa sheegay in ay sii wadi doonto isbadalada dhaqaale ee horseeday heshiiska deen cafinta Soomaaliya.
Go’aankan ayaa ka dambeeyay ka dib kulan ay sarakiisha wadamadan ay yeesheen iyaga oo adeegsanaya qalabka casiga ah ee la iska arko, waxa uuna kulankaasi qaatay in ka badan 9 saacadood.
Sida ay wakaalada wararka ee Reuters ka soo xigatay sargaal ka tirsan hay’adda lacagta aduunka ee IMF, wadamo badan ayaa lagu wadaa in ay Soomaaliya ka cafiyaan deymihii ay ku lahaayeen.
Toddobaadkii aanu soo dhaafnay ayay ahayd markii bangiga aduunka iyo hay’adda IMF ay sheegeen in Soomaaliya ay qaaday tallaabooyiinkii loo baahnaa si deymaha looga cafiyo.
Hase ahaatee hadda waxaa deynta Soomaaliya lagu leeyahay lagu qiyaasayaa 4.6 bilyan oo doolar.
Isha: BBC & Somali Channel
Previous article”Soomaalidu waa UMMI dhega xiran!” – TV-ga SVT oo markale u gefey Soomaalida Sweden (Dhegeyso waxa uu sheegay & wixii laga yiri)
Next articleSaluug ka taagan Sweden oo aan weli la handaraabin (Arag tirakoobka) + Sawirro